मर्जरमा जान तयार हुने बैंकको संख्या २३ पुग्यो, कुन–कुन हुन् हेर्नुहोस् लिस्ट? - पब्लिक पाेष्ट
२०७६, २६ असार बिहीबार July 12, 2019 EP EDITORLeaveaComment on मर्जरमा जान तयार हुने बैंकको संख्या २३ पुग्यो, कुन–कुन हुन् हेर्नुहोस् लिस्ट?
काठमाडौं। मर्जरका लागि प्रतिवद्धता जनाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ । यसैबीच, २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरका लागि प्रतिवद्धता सहितको पत्र केन्द्रीय बैंकमा पठाएका छन् । यस्तै, ३ वटा विकास बैंकले पनि केन्द्रीय बैंक सामु मर्जरका लागि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
तौल घटाउन चाहानुहुन्छ ? यसरी पिउनुपर्छ पानी..
छविराज र नायिका शिल्पा पोखरले बिच झगडा नगर्ने लिखित सम्भौता
२०७४, ६ पुष बिहीबार December 21, 2017 EP EDITOR
शेयर बजार ऋणात्मक,बीमा समूहमा उच्च गिरावट
२०७४, १८ मंसिर सोमबार EP EDITOR
‘सबैको लघुवित्त’ को आइपीओ साउन १ देखि खुल्दै
२०७६, २३ असार सोमबार EP EDITOR